တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရောင်းချသူ အရောင်းရဆုံး Wafer အမျိုးအစား စီတန်းထားသော Cast Iron Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ - Allway Valve
ဤ Iron wafer အမျိုးအစား လိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည် DIN.API နှင့် BS စံနှုန်းအရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အရည်အသွေးမြင့် စံချိန်စံညွှန်းများစွာနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ၎င်းကို ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သော သံသွန်း/ဆွဲကြိုးသံပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် valve လုပ်ငန်းအတွက် အနှစ် 20 နီးပါး အပ်နှံထားပြီး၊ အရောင်းဈေးကွက်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ မင်းရဲ့ ရေရှည်လက်တွဲဖော်ဖြစ်လာဖို့ ငါတို့မျှော်လင့်တယ်။
Iron wafer အမျိုးအစား butterfly valve ၏ကိုယ်ထည်ပစ္စည်းသည် သံသွန်း သို့မဟုတ် ductile သံဖြစ်သင့်ပြီး disc သည် သံ၊ သံမဏိ၊ ကြေး၊ စသည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုင်ခုံသည် EPDM၊ NBR၊ VITON၊ စသည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်သည် wafer ဖြစ်ပြီး ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ တင်းကျပ်မှုကောင်းပြီး low နှင့် အလယ်အလတ်ဖိအားကြားခံတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်မှတ်မှာ လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းများ၏ ထိပ်တန်းအရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို စုစည်းရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သင့်သည်၊ ထိုအချိန်တွင် ထုတ်ကုန်အသစ်များကို မကြာခဏဖန်တီးပါ။ diverse customers' calls for for Factory Supply China Supplier Best Selling Wafer Type Lined Cast Iron Butterfly Valve, Our support concept is honesty, aggressive, realistic and innovation. With the help, we will improve much better.Factory Supply China Butterfly Valve, Alarm Switch, We significantly promise that we supply all the customers with best quality items, the most competitive prices and the most prompt delivery. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သာယာလှပသော အနာဂတ်ကို ရရှိရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
Iron wafer အမျိုးအစားလိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ တင်းကျပ်မှုကောင်းမွန်ပြီး ရေပေးဝေမှုနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ ဓာတ်ဆီဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ သတ္တုဗေဒနှင့် အခြားကုန်သွယ်မှုများကဲ့သို့ အနိမ့်နှင့် အလယ်အလတ်ဖိအားကြားခံတွင် အသုံးများသည်။
Iron wafer အမျိုးအစား butterfly valve ၏ကိုယ်ထည်ပစ္စည်းသည် သံသွန်း သို့မဟုတ် ductile သံဖြစ်သင့်ပြီး disc သည် သံ၊ သံမဏိ၊ ကြေး၊ စသည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုင်ခုံသည် EPDM၊ NBR၊ VITON၊ စသည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ကိုင်လီဗာ၊ worm gear သို့မဟုတ် actuator များဖြင့် လွတ်လပ်စွာ လည်ပတ်နိုင်သည်။
Iron wafer အမျိုးအစားလိပ်ပြာအဆို့ရှင်များသည် မူရင်းဒီဇိုင်း၊ လက်ရာမြောက်သောနည်းပညာ၊ ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများပါရှိသည်၊ ၎င်းသည် ISO9001 နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Iron wafer အမျိုးအစား လိပ်ပြာအဆို့ရှင် အများအပြားရှိသောကြောင့် ပေးပို့ချိန်သည် တိုတောင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ရထားပို့ဆောင်ခြင်း၊ လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် အခြားအရာများ။ အာမခံကာလ 12-18 လဖြစ်သင့်သည်။
hot Tags:: Iron Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ရောင်းချသူများ၊ လက်ကားဝယ်ယူ၊ စက်ရုံ၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာသော၊ ဈေးနှုန်းသက်သာသော၊ ဈေးနှုန်းစာရင်း၊ ကိုးကားချက်